စတိုင်နံပါတ်: SH-954 အရောင်: အနက်ရောင် / အနီ / အဖြူအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၆၆% ရောင်ခြည် ၂၉% နိုင်လွန် 5% spandex ponte-roma, 380gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic မှတ်ချက်။
စတိုင်နံပါတ်: SH-953 အရောင်: ရေတပ် / တော်ဝင်အပြာရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၆၆% ရောင်ခြည် ၂၉% နိုင်လွန် 5% spandex ponte-de-roma, 380gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic မှတ်ချက်။ နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း၊
Style No .: SH-511 အရောင်: အနက်ရောင် / အနီ / အဖြူအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုးမွေး၊
Style No .: SH-508 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 70% ဝါဂွမ်း 25% polyester 5% spandex သိုး, 260gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, ရက်သောတိပ်၊ Reflective silver zipper
Style No .: SH-1029 အရောင် - အနက်ရောင်အရွယ်အစား - ၆-၁၄ A အထည် - ၁၀၀% polyester slub သိုးနောက်ကျောတွင်တပ်ထားသော၊ 280gsm + 50D ရက်လုပ်ပြီးသားပါသည့်သိုးထည်၊ ပိုးထည် ၁၆၀ ဂ။ ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်အလှဆင်တံဆိပ်၊ elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊
စတိုင်နံပါတ်: SH-1006 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: 6-14A အထည်: ကိုယ်ထည် / ကိုယ်ထည်: Shell: ၁၀၀% polyester 50D ပိုးထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပိုးထည် 180g, 210T taffeta နံရံ; လက် - ၃၀၀ ဂရမ်တွဲဖက်ပစ္စည်း - ၁၀၀% polyester ချည်ထိုးထားသောဂျာကပ် - ပိုလာသိုးမွေး၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊
Style No .: SH-1048 အရောင်: အနီရောင် / ရေတပ် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစူပါပျော့ပျောင်းသောလက်ဖြင့်ကိုင်ထားပြီး 520gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Herringbone တိပ်၊ ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ သွား
Boy's hoodie နှင့်ဘောင်းဘီ SH-985
Style No .: SH-985 အရောင်: ရေတပ် / မီးခိုးရောင်မဲလန်းပန်းညို / အပြာရင့်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး, 260gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: hood drawcord, ပလပ်စတစ်ပွင့်လင်းတံဆိပ်၊ သားပိုက်ကောင်အိတ်ကပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်
Boy's hoodie နှင့်ဘောင်းဘီ SH-984
Style No .: SH-984 အရောင်: အနက်ရောင် / အနီရောင် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုးမွေး၊ : နေရာချထားပုံနှိပ်
Boy's hoodie နှင့်ဘောင်းဘီ SH-981
Style No .: SH-981 အရောင်: အနက်ရောင် / အနီရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 70% ဝါဂွမ်း 25% polyester 5% spandex flee, 260gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: hood drawcord, Herringbone တိပ်မှတ်ချက်များ။ ပေးစာ
Boy's hoodie နှင့်ဘောင်းဘီ SH-980
Style No .: SH-980 အရောင်: ရေတပ်၊ အဖြူ / အနီရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုးမွေး၊ : နေရာချထားပုံနှိပ်
Boy's hoodie နှင့်ဘောင်းဘီ SH-979
Style No .: SH-979 အရောင်: အနက် / အဖြူ / အနီရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး၊ & panel မှချုပ်ချုပ်မှတ်ချက်
<< <နောက်သို့ 123456 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၂/၇